Amagqabantshintshi ahlekisayo avela kwiJaji ukuva okwesibini ukuvela kweMeko yeengozi ze-Ankara YHT | RayHaber | raillynews
[19 / 02 / 2020] I-İskenderun Port Elinye iqela eliphikisayo le-Mersin Port	31 Hatay
[19 / 02 / 2020] Inyathelo lokuqala leProjekthi yeNkqubo yeNtambo ye-Nemrut iya kuthathwa kulo nyaka	02 Adiyaman
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia06 AnkaraAmagqabantshintshi ahlekisayo avela kwiJaji ukuva okwesibini imeko yeengozi ye-Ankara YHT
24 / 01 / 2020 06 Ankara, Ummandla waseMntla Anatolia, railway, JIKELELE, ITrove Train, ZOMHLATHI, ETURKEY
ankara yht ityala lengozi, isimangalo sesibini, umongameli wenkundla
Ukuxoxwa kwetyala lesibini kwezomthetho, okwenzeke e-Ankara ngoDisemba ngo-2018 kwingozi yesitimela esinamandla, abathathu kubo bengamachwephesha, basweleke e-Ankara Courthouse. Intloko yenkundla ixelele ixhoba ukuba lisoyika ukungena kuloliwe emva kwengozi, apho abonzakeleyo basindileyo kwingozi.
Ngokweendaba zikaSerkan Talan ovela kwiDonga laseNew YorkUkuchotshelwa kwetyala lesibini kwityala elalivulwe ngakumangalelwa ali-13 e-Ankara nge-2018 kaDisemba, ngo-10 malunga nengozi yesithuthi esiphakamileyo apho abantu abasithoba basweleke kwaye uninzi lwenzakala luqale kwinkundla yama-30 yase-Assize e Ankara.
Abamangalelwa abali-10 beviwe kwingxoxo yokuqala yetyala elinxulumene nengozi eyenzekileyo ngenxa yokushayisana phakathi kweSantya esiPhambili (YHT), esasihamba phakathi kwe-Ankara neKonya, kunye nesitimela esisesikhokelo sokulawula oololiwe. Ukuchotshelwa kwetyala lesibini kuzakuqhubeka neengxelo zezalamane kunye nabalimele abo baphulukene nobomi babo kule ngozi.
IZIQINISEKILEYO EZIMBINI ezifunyenweyo zenzekile
Ukuqala ukuxoxwa kwetyala malunga nengozi kwenzeke nge-13 kaJanuwari. Kwityala lokuqala, wayethathe isigqibo sokukhulula igosa elihamba ngeenyawo u-Sinan Yavuz kunye nomlawuli we-traffic u-Emin Ercan Erbey, owayegcinwe ejele ixesha elingaphezu konyaka, kwaye eqhubeke nokuvalelwa kwegosa likaloliwe u-Osman Yıldırım.
I-HKP LAWYER IZAKHONZA KWI-YILDIRIM YOKWAKHA
UHakan Çavdar, osindileyo kule ngozi, wayengowokuqala ukungqina. Echaza ukuba wayekhalaza kubo bonke abo babenetyala, uÇavdar wathi, “bendizosebenza eKonya ngexesha lesi sigameko. Ndihlale iinyanga ezimbini ndingasebenzi. ”
Ummeli weqela leNkululeko le-People's Doquan Erkan uthe bafuna ukuthatha inxaxheba kwelilungu le-TCDD. "Sixhomekeke yomqhaphu vulu eTurkey," watsho Erkan: "Ndaba umviwa yasepalamente kulo mzi. Esi sixeko silawulwa ngerente. Masilawule isayensi endaweni yokurenta. UCahit Turan wakhalaza malunga nabo bafumana u-Binali Yıldırım, uLütfi Elvan kunye nethenda yokubonisa, eye yawa nguMphathiswa Wezothutho kude kube ngu-2016 ”.
U-Adem Şahin Çetin, omnye wabasindileyo owenzakeleyo kuloo ngozi, owathi "andina ndawo eyaphukileyo", wathi, "Ingqondo yam yaphukile. Ndikwakhalaza malunga nabamangalelwa kunye nabangengabakhuseli. Omnye umntu owenzakeleyo u-Ahmet Elmas wathi, “Ndenzakale edolweni. Ndanyangwa esibhedlele. Ndenza imisebenzi yokwakha andikwazi ukuya emsebenzini kwiintsuku ezingama-40. Ndiyakhalaza malunga nabamangalelwa. ” U-Aydın Can Akdur, omnye osindileyo owenzakeleyo, uthe, "Akukho nto ingako siza kuyithetha. Ndikhalazela bonke abatyholwa ukuba bafumane okusesikweni.
UMBONELELO UKUXELWA NGUMVUKIYO KUSUKA EBANDLENI: UKUZALISEKILE AKUKHO BUNGOZI
UBurcu Borulday, osebenza kwezempilo kwaye wenzakele, uthe, "Ndiyakhalaza ngoyena mntu unegunya kuba le nkqubo yavulwa ngaphambi kokuba ifakwe ngokupheleleyo. Ndifumene unyango lwengqondo malunga nonyaka kwaye andikwazi kulala ndodwa. Andazi ukuba uza kuthatha uloliwe okhawulezayo emva kwendibano yokugqibela, kodwa andizukuvuma. ”
Umongameli wenkundla wathi, "Akukho mfuneko yokuba ube nethemba elinje. Umhlobo wethu ongumgwebi uya kuKonya ahambe. " U-Borulday owonzakeleyo uthe emva kwale ngxelo, "Ndihlala nditsho ukuba andithathi uloliwe okhawulezayo wonke umntu endimbonayo."
U-Ayşe Nevin Sert, ongomnye wabasindileyo owenzakeleyo wathi usakhwela kuloliwe ngenxa yomsebenzi wakhe, uthe, "bendithemba kakhulu emva kokuva kuqala. Into ebithethwa apha yandothusa nangakumbi ngololiwe. Ndikhalaza wonke umntu. ”
"Kukho umzekeliso wokuba uloyiko alunamsebenzi ngokungxama," utshilo umongameli wenkundla.
U-Fevzi Karayel, ojiwe umpu wakhe kule ngozi kwaye wazihlalela iveki yonke, wathi, "Uhlekise ngabantu kumajelo eendaba ezentlalo. İsa Apaydın Ndikhalazela wonke umntu, ngakumbi. Owayesakuba ngumphathi Jikelele we-TCDD owathi washiya unyaka ophumelele kakhulu İsa ApaydınNdikhalaza kakhulu. "
UGizem Nida Çınar, osindileyo kule ngozi kwaye wathi wafumana unyango lwengqondo, wathi, “Ndisasebenzisa iziyobisi. Ndingummangali. ” Emva kwala mazwi, umongameli wenkundla wathi, "Andizisebenzisi ezo ziyobisi." Ngala magama, u-Çınar, osindileyo kwingozi eyenzekileyo, uphendule wathi, "Andikwazi kuba ulungile ngaphandle kwezo ziyobisi."
"Ndikhalaza ngalabo bathathe intombi yam kum," utshilo uEsma Yilmaz, umama ka-Kubra Yilmaz, osweleke kule ngozi. Utata kaKübra Yılmaz, uTurhan Sapancı uthe, “Sibuhlungu kakhulu. Ngelixa ndandizokwakha ikhaya elonwabileyo, ubomi bam buphawuleka ngephanyazo ngelixa ndiphupha ndithanda unyana. Ndikhalaza kwabo banembopheleleko, ”utshilo.
U-Osman Yıldırım, obesabanjwa kwityala leengozi zesantya esiphezulu, abanye abarhanelwa abasixhenxe ngaphandle kwembuyekezo, kunye no-Emin Ercan Erbey noSinan Yavuz, abakhululwe kwityala lokuqala:
Umlawuli we-HT YHT Ankara uDuran Yaman, Umphathi weNkonzo yeTrafiki ye-YHT Ünal Sayıner, uKhuseleko lwe-TCDD kunye neCandelo loLawulo lweMigangatho INtloko u-Erol Tuna Aşkın, TCDD yeTrafikhi kunye neCandelo lezoLawulo lweSitishi INtloko kaMükerrem Aydoğdu, uSekela-Mlawuli weSitishi se-YHT uSekela-Mlawuli uKadir Oğuz, Umphathi wesebe uLoliwe. USekela-Mlawuli u-Ergun Tuna
U-Kadir Topbaş akazange abe khona kwi-hearing ye-casebus yesithintelo seTrobusbus kwakhona
Ukuqala kwesilingo seTyala leengozi i-10 iqala ngoSeptemba!
I-Scandal e-Ankara YHT Crash More!
3. isicelo sikhalazo kwimeko yesikhululo-moya
I-Ankara YHT Ingxelo Yengozi YoNgqina NjengoNgqina Lolawulo
Abasebenzi be-TCDD bavalelwe ku-Ankara YHT uLingo lweNgozi engaDweliswanga
I-Ankara YHT Ingozi yesi-2 Ukukhutshwa
Ukuphendula ku-Topbaş ongazange athathe inxaxheba kwi-CHP
Iimeko zeMetrobus ekuthengeni i-4. kubonwa kwimeko
Qeqesha ukuqhuma eNew Jersey
Ukungabikho kwe-TCDD e-Çorlu I-Accident ye-Accident ye-Accident
Ityala leengozi ye-Ankara YHT ukuqala ngoJanuwari 13
I-BTS Ankara YHT Inkcazo yemeko yeengozi
Ukusuka kwi-CHP ukuya kuRhulumente we-Dent kunye ne-Izmir Metro e-Ankara Metro…
Ezinye iingcali ezibizwa ngo-Emin Erbey
ukuqhuma kwezitima eziphezulu
Uloyiko alunamsebenzi ngokungxama
Xhumana noSinan ngqo
Ukukhawuleza okuPhezulu ukuQeqesha ukuPhuka